Medicine "Chondroxide Forte" (amaphilisi, ijeli) libhekisela amalungiselelo ukugqugquzela izicubu kokuzalwa ama-NSAID. izingxenye ezisebenzayo - sulphate chondroitin, meloxicam. Ithuluzi kunomphumela eziyinkimbinkimbi, kubambezela ukuthuthukiswa esiwohlozayo disc isifo ne-osteoarthritis, inethonya analgesic. Eliphezulu yamangqamuzana isisindo mucopolysaccharide - sulfate Chondroitin - isakhi yemvelo ijwabu uqwanga. inqubo Compound kuzole umzimba calcium-phosphorus, i-kuvimbela enzyme bazibangela ukubhujiswa uqwanga. Uphiko kunomthelela ukubuyiselwa evele articular, inciphisa ubuhlungu ngcono ukuhamba. Meloxicam has analgesic nomphumela eqeda ukuvuvukala. Uphiko akuphazamisi omubi uqwanga, ngokuba hondroneytralnym izidakamizwa. Meloxicam kunciphisa inani mediators ukuvuvukala nobuhlungu (prostaglandins) endaweni ethintekile.
Kusho "Chondroxide Forte." ubufakazi
Imithi enqunyiwe for ekwelapheni izifo eyinkimbinkimbi kakhulu locomotor uhlelo dergenerativnoy dystrophic nemvelo. Ngu izinkomba zihlanganisa ukhwaliti ubuhlungu emuva, osteoarthritis, kanye nezinye izifo nzima ubuhlungu.
Izidakamizwa "Chondroxide Forte." Izimo
Ngaphandle Lutho neze ezinconywe zokugwema ukuphuka kwesikhumba ezindaweni okuhloswe isicelo. Izimo ifaka kufikela yobudala engu-12, hypersensitivity. Okumele kuqashelwe kwenziwe imisebenzi isabelo iziyaluyalu nezinso isibindi, obonakaliswe ukugeleza pathologies wokugaya ukudla (at the stage okukhulu isilonda), e zokuguga, lapho izifo yegazi. Medicine "Chondroxide Forte" is contraindicated ku nokukhulelwa kanye lactation
izidakamizwa Ngaphakathi unikezwa amaphilisi 2 kabili ngosuku. Ngaphandle isicelo mncane ungqimba liniment obuphelele kusukela ngamasentimitha amahlanu. Imvamisa yokusetshenziswa - akukho izikhathi ezingaphezu kwezintathu ngosuku. Ngemuva kokufaka isicelo ngaphandle kumele ugeze izandla zakho kahle. Isikhathi isethi onguchwepheshe futhi kuncike kobukhulu zokugula kanye kusebenta zokwelapha.
Izidakamizwa "Chondroxide Forte" (ochwepheshe Izibuyekezo ukusekela lokhu) idluliselwe ikakhulu egculisayo. Cishe ukwenzeka ngokumelene isizinda ukungabekezelelani ngabanye nokungezwani komzimba. Ikakhulukazi, lapho lusetshenziswa ihlelwe ngokulandelana kwezihloko kwenzeka ububomvu, ukulunywa, ukucasuka. Esimeni ukusabela ezingezinhle Kufanele uxhumane onguchwepheshe.
Lapho isicelo ngaphandle imakwe aphansi kakhulu ukumuncwa letindzala. Kule ndaba, uma usebenzisa gel ukweqisa izidakamizwa akunakwenzeka. Kuyinto kwakuthiwa ukuvela kungenzeka komzimba, ukucasuka ukoma, ukuqubuka esikhumbeni. Esimeni izenzakalo ezinjalo kudingeka ukuba aye kudokotela. Ekusebenteni, abachazwa kokuba emitholampilo amacala ukubaluleka kokusebenzisana nomuthi neminye imithi. Kusho akunamthelela sine-ke akunamthelela lengqondo ukusabela.
Izithelo guanabana: ukubuyekezwa odokotela. Abaphatha Ingabe umdlavuza guanabana?
Umuthi 'Amosin "500 mg: imfundo manual, ukubuyekezwa
Yikuphi-analog "Buscopan" ezishibhile futhi ngempumelelo? Uhlu analogue "Buscopan"
Umuthi 'Remicade ": yokusetshenziswa, ngempela
"Brizantin": yokusetshenziswa. Ikhambi ukubhema "Brizantin"
Bioreparatsiya - kuyini? Bioreparatsiya isikhumba: incazelo inqubo, imikhiqizo, ukubuyekezwa
Sokudumisa - a ... Meaning of igama elithi "sokudumisa"
Mermaid imvunulo ngezandla aphume edayisa izinto
Kuphi umfula uMoscow oma khona? Uhamba ngomfula iMoskva